Zọ asaa iji zipụ Email Email Na-emezughị | Martech Zone
Ọnụ ọgụgụ ReachMail na-egosi na ihe karịrị 40% nke ozi ịntanetị mepere na ngwaọrụ mkpanaka. Ana m agagharị na ozi ịntanetị na ekwentị mkpanaaka m ogologo ụbọchị ka m nwee ike ị nweta ozi ịntanetị kachasị mkpa. Ọtụtụ n'ime ozi ịntanetị m na-ehichapụ bụ nke azụmahịa na ọdịdị na enweghị ike ịgụ na iPhone m. Kama ịnwa ịbịgharịa ma ọ bụ gbanwee na ọnọdụ ihu igwe, naanị m na-ehichapụ ha. Agbanyeghị, mgbe m ruru email nke nwere mkpụrụedemede mara mma yana nhazi dị ọcha, ana m eji oge ụfọdụ wee tụgharịa ya.
ReachMail na-ewetara gị Infographic anyị banyere ihe ị ga-ezere na mkpọsa ekwentị Wzọ asaa iji gbapụ Mgbasa Ozi Email Na-aga nke Ọma.
Omume agbanweela site na email mkpanaka na oge ya nke ndị na-ere ahịa email tinyere omume kachasị mma iji hụ na ndị na-edebanye aha ha nwere ike ịgụta ozi ha, dị mkpa ma jiri ya kpọrọ ihe. N'agbanyeghị etu o si pere mpe, ọ dị m ka ọ na-achọta bọtịnụ wepu aha na ngwaọrụ mkpanaka m mgbe email ahụ anaghị ezute atụmanya m.
Tags: email imeweemail mkpanakaimewe email imeweozi
Ọkt 8, 2013 na 12:22 PM
Great post na info graphic n'ihi na ọ na-akụ aka nri niile ebe! mgbe a na-ewepụta ya na "adịghị mma" nke a na-arụ ezigbo ọrụ nke ịkọwa ndị isi ihe ị kwesịrị ime.